Mareykanka oo Digniin culus u diray Kooxda Farmaajo. - XAL DOON
Home NEWS Mareykanka oo Digniin culus u diray Kooxda Farmaajo.
Mareykanka oo Digniin culus u diray Kooxda Farmaajo.
Dowladda Mareykanka ayaa markale taageero u muujisay shirka Golaha Wadatashiga qaranka ee uu shir guddoomiye ka ahaa Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Mareykanka ayaa si cad u taageeray bayaanka kasoo baxay shirkaas waxa uu digniin u diray kooxda farmaajo in ay isku daydo carqaladeynta Doorashooyinka.
Farmaajo oo ah nin aad u dhibsado sheeg-sheegidda Doorashooyinka ayaa noqday mid guud ahaan caalamka si cad u arko qorshihiisa dib u dhigista Doorashada.
Fariin socotay wax ka yar daqiiqad ayay Waaxda kusoo koobtay mowqifka ay ka qaadatay dadka isku dayaya in ay carqaladeeyaan jadwalka cusub ee Doorashooyinka Soomaaliya ee loosoo afjaro Doorashada daba-dheeraatay.
Ned Price, Afhayeenka Waaxda arrimaha Dibadda Mareykanka oo aqriyay bayaanka kasoo baxay Mareykanka ayaa digniin u diray dhinacyada ama Shaqsiyaadka daneynaya in ay lugaha ku dhegaan geedi socodka Soomaaliya.
“Mareykanku waxa uu si gaar ah u eegayaa go’aanka 9kii Janaayo 2022 ee kasoo baxay shirka Golaha Wadatashiga qaran si loosoo gabagabeeyo Doorashooyinka waqtigeedu dheeraaday, waxa aan ugu baaqeynaa dhammaan Madaxda Dowlad-Goboleedyada & kuwa Federaalka in ay ilaaliyaan waqtiga cusub ee lagu heshiiyay, isla markaana ay saxaan khaladaadka Habraaca” ayuu yiri Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
Mareykanka ayaa si cad u sheegay in uu xayiraad socdaalka ah uu kusoo rogayo qofkii kahor yimaada dhabbaha geedi-socodka Doorashooyinka, arrintaan waxa ay xal u noqoneysaa in la dadejiyo Doorashada sida uu aaminsan tahay Washington.
“Doorashooyinka Soomaaliya sanad ayay dib u dhaceen xiligii loo qabtay, 8 Febaraayo waxa ay ku beegan tahay hal sano kaddib markii ay dhammaatay xil heynta Madaxweynaha, Mareykanka waxa uu qaadanayaa go’aamo ay suuragal tahay in xayiraad dhanka socdaalka si looga hortago dib u dhigis ama caqabad lagu sameeyo jadwalka Doorashada” ayuu Yiri Ned Price.
.@StateDeptSpox discusses Somalia’s decision to complete the country’s long-overdue parliamentary elections by February 25. “We call on all of Somalia’s national and federal member state leaders to adhere to the newly agreed timeline and correct the procedural irregularities." pic.twitter.com/tngwI5xMoS
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isku dayay Afgambi uu la damacsanaa Ra’iisul Wasaare Rooble oo meel wanaagsan marsiinaya Doorashooyinka.
Farmaajo ayaa sidoo kale Maxamed Mursal kala kaashaday muddo kororsi dhicisoobay oo sababay in lagu go’doomiyo Villa Somalia 12kii April 2021, wixii xiligaas ka dambeeyay waxa uu waday qorshooyin liita oo uu ku daahinayo Doorashooyinka.